WAR DEG DEG AH: Dab Qasaare ka dhashay oo goor dhow ka kacay Magaalada Boosaaso. – Gobolada News Agency
WAR DEG DEG AH: Dab Qasaare ka dhashay oo goor dhow ka kacay Magaalada Boosaaso.
29/11/2015 caaqil opinion, Wararka
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegaya in goor dhow dab aad u xoogan uu ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala Magaaladaasi, iyadoo Ololka dabkaasina meelo badan oo magaalada ka mid ahi laga arkayo.
Sida wararku tilmaamayaan dabkan ayaa ka kacay saddex Xarumood oo lagu iibiyo Shidaalka, Raashiinka iyo goobo kale oo lagu iibiyo agabyada waxbarashada oo ku yaala bartamaha Magaalada Boosaaso ee Xarunta ganacsiga maamulka Puntland.
Goob jooge ku sugan halka uu dabku ka kacay ayaa sheegay in dabkan uu markii hore ka bilowday koronto, kadibna ku faafay qeybo kala duwan oo goobo ganacsi ah.
In kastoo dadaal fara badan oo ay sameeyeen dadka deegaanka, ganacsato iyo maamulka degmada lagu guuleestay in la damiyo dabka ayaa haddana waxaa jira qasaare hantiyadeed ka dhashay dabkan caawa ka kacay Magaalada Boosaaso.
Injineer Yaasiin Mire Dacar oo ah Duqa magaalada Boosaaso ayaa warbaahinta u sheegay in dabkan uu ka kacay Magaalada khasaaraha uu geystayna uu yar yahay, maamulka degmada iyo dadka deegaankuna ku guuleesteen daminta dabkaasi sida uu yiri.
“Khasaare hantiyadeed aan badneen ayaa ka dhashay dabka ALLE mahadii waan ku guuleesanay in dabka uusan gaarin goobo kale” ayuu yiri Duqa Magaalada Boosaaso Yaasiin Mire Dacar.
Ma ahan markii ugu horaysay dab sidan oo kale uu ka kaco suuqa Magaalada Boosaaso, sanadkii 2011 ayay ahayd markii dab noocaani oo kale ah uu ka kacay suuqa ween Magaalada Boosaaso.
Salaad Hussein Mohamud (Salaad Daacad)
Previous Post:Somali weerar ku qaaday Baarlamanka Can..
Next Post:C/kariin Gulled iyo C/weli Gaas oo goordhow is arki doona iyo Ciidamo gaashaman oo la…